Shwemyanmar – Page3– Shwe Myanmar
တပ်မတော်ကတော့ပြောပြီ …………. တပ်မတော်ကတော့အစပျိုးပြလိုက်ပြီ။ ငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာ ကြည့်ကပါ။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှခိုးဝင်လာသော ဘဂါင်္လီမွတ်စလင်ကုလားများ အားအစိုးရမှပြန်လည်လက်ခံ မှုနှင့်ပါတ်သက်၍တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ရုံးမှ အောက်ပါအတိုင်းသဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့…. ***လူအခွင့်အရေးလူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုစသည်တို့ အားအကြောင်းပြ၍နောက်ကွယ်မှ […]
လားရှိုးမြို့နယ်၌ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ လားရှိုး ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့နယ် ခါးသျှီကျေးရွာအဝင် မောင်းတံဂိတ်အနီး၌ ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက ဆိုင်ကယ်စီးလာသူထံမှ […]
ပွင့်လင်းရာသီ စတင်ပြီဆိုတာနဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ဒေသ တကြောက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံရဲ့ လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကြားလာရပြ​ပေါ့​လေ
ပွင့်လင်းရာသီ စတင်ပြီဆိုတာနဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ဒေသ တကြောက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံရဲ့ လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကြားလာရပြန်ပါတယ်။ TNLA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ့်ဖက်ကာ (၁၃) မိုင် နမ့်ခမ်း ကားလမ်းပေါ်က မော်တော်ယာဉ်တွကိုဒီဇင်ဘာလ […]
Posted in​ဆောင်းပါးLeaveaComment on ပွင့်လင်းရာသီ စတင်ပြီဆိုတာနဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ဒေသ တကြောက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံရဲ့ လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကြားလာရပြ​ပေါ့​လေ
ရှေ့ဆက်တိုးလိုက်တဲ့သမီး ================= ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ 14/12/2017 ညပိုင်း ၁၀ နာရီလောက်မှာ သတို့သမီးလောင်းရဲ့ အဖေ ၉၆ပါးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်။ နောက်15/12/2017နေ့မနက် သမီးက မင်္ဂလာဆောင်တယ်/ဝမ်းနဲစွာပေါ့။တဖက်ကလည်း ဖအေ့နာရေး။တဖက်ကလည်း […]
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသို့ တက်ရောက် ဖူးမြော်ခွင့် ယာယီပိတ်မည် Posted: December 15, 2017 ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်မှ ၂၀၁၈ […]
မောင်တောမြို့နယ်၌ နေရပ်စွန့်ခွာ ဘင်္ဂလီ ၆၀၀ကျော်ရောက်ရှိ ================== ================== မောင်တောမြို့နယ်၊ ပညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာနှင့် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကြား ခန့်မှန်း(DT-368935)၌ နေရပ်စွန့်ခွာဘင်္ဂလီ ၆၈၇ ဦး(ကျား ၃၁၇၊ မ […]
လေတပ်ကို ခေတ်မီလေတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဟု တပ်ချုပ် ပြော ================== ================== သာလွန်သည့် လေကြောင်းစွမ်းအား ဖြစ်လာစေရေးအတွက် မိမိတို့ တပ်မတော်၏ လေတပ်ကို ခေတ်မီလေတပ်မတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း […]
မှတ်ပုံတင်၏ရှေ့နံပါတ်များသည် ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဘယ်ပြည်နယ်များကို ကိုယ်စားပြုသလဲ? (မသိသေးသူများအတွက်) မှတ်ပုံတင်၏ရှေ့နံပါတ်များသည် သင်သည် ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဘယ်ပြည်နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည် (သို့) ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ဘယ်ပြည်နယ်တွင် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ နံပါတ်နောက်မှ အက္ခရာသည် မြို့နယ်ကို […]
ကလေးငယ်ရှိတဲ့ မိဘတွေ ဂရုစိုက်ပါနော် ဖြစ်ပုံမှာ ( ကလေးရဲ့ မိခင် ပြောပြချက်အရ ) ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ နေ့ခင်း ကလေးကို သိပ်ထားပါတယ်။ ကလေး အိပ်ရာမှ […]